पिनास के कारणले हुन्छ ? कसरी बच्ने ? के खाने-के नखाने ? « News24 : Premium News Channel
हाम्रो टाउकोको खप्परमा चार जोडा हावाका थैला हुन्छन् । त्यसलाई हामीले ‘एयर फिल्ड क्याभिटिज’ भन्छौं । ती थैलाहरूले हाम्रो टाउकोलाई सन्तुलित बनाउने, आवाजलाई स्वरुप दिने काम गरिरहेका हुन्छन् । ती चारवटै थैलाको मुख हाम्रो नाकनिर हुन्छ । जसलाई हामी ‘मिडिल मिएट्स’ भन्छौंं ।त्यसमा तीनवटा चेम्बर हुन्छन् ।